အဆိုပါ 10 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids Raws ပစ္စည်း | AASraw steroids
အပေါ် Posted 07 / 18 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်4နှစ်ပေါင်းအရောင်းဒေတာအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအရကျနော်တို့ 10 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids (AAS) ဆက်စပ်ဓာတ်ခွဲခန်းများ, ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ကြမ်းအကျဉ်းချုံး။
ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်တန်းသုံးထူးချွန်ကုန်ကြမ်းချကျဉ်းပါပြီ။ အပြည့်အဝစာရင်းများအတွက်ထိပ် 10 လူကြိုက်များထုတ်စစ်ဆေး ဟို steroids ကုန်ကြမ်း.
အကြီးမားဆုံးယေဘုယျအားအရောင်း AAS Raws ပစ္စည်း: အောက်ကုန်ကျစရိတ်ထိုးသွင်း AAS Raws ပစ္စည်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအစုလိုက် Gain: အကောင်းဆုံးယေဘုယျခံတွင်း AAS Raws ပစ္စည်း:
testosterone Enathate / Testo အီး / စမ်းသပ်ခြင်း E ကိုအမှုန့်
rating:★★★★★ Trenbolone Acetate / Tren Ace ကို / Tren တစ်ဦးကအမှုန့်
rating:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol အမှုန့်
ကျွန်တော်တို့ဆီကအကြီးမားဆုံးရောင်းချမှု AAS ကုန်ကြမ်း
အလွယ်ကူဆုံးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နှင့်စျေးအသက်သာဆုံး AAS ကုန်ကြမ်း
ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးအပြန်အလှန်အများစုကြိုဆို steroids ။
စွမ်းဆောင်ရည်အားကစားသမားများအကြားလူကြိုက်အများဆုံး Tren ဒြပ်ပေါင်း
Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များကြောင့် Enanthate Ester ဝင်းတွင်ပိုမိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်တာမှ Trenbolone Enanthate သာ. အစွမ်းရှိ၏။
အဆိုပါ Trenbolone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအများစုမှာအသုံးပြုသူများက '' ပထမဦးဆုံးသွားလာရင်းအမြဲ Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သည်။
ဤတွင်အဆိုပါထိပ်တန်း 10 လူကြိုက်များသောဟို steroids ကုန်ကြမ်း Are:
testosterone Enathate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားလူကြိုက်များသော steroids ထိုးသွင်း
Methandrostenolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားလူကြိုက်များသောခံတွင်း steroids
Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - ယေဘုယျအားအစွမ်းထက်ထိုးသွင်း steroids
Oxandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားလူကြိုက်များသောအမျိုးသမီးများနေ့အသုံးပြုမှုခံတွင်း steroids
Stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားလူကြိုက်များသော Gain ခံတွင်း steroids မှီ
လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း - အများစုကယေဘုယျအားလူကြိုက်များသော Peptide
Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအား Underrated steroids
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းအရည် - အများစုကယေဘုယျအား Long-သရုပ်ဆောင် steroids
Drostanolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားထူးခြားဆန်းပြား steroids
Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - အများစုကယေဘုယျအားနည်းသောဘေးထွက်သက်ရောက်မှု steroids
ဟို Steroid တစ်မျိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုနားလည်ခြင်း
တစ်ဦးဟို steroids ရွေးချယ်တဲ့အခါအဘို့အကြည့်ဖို့အနည်းငယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းများအဘို့, လူကြိုက်များထုတ်ကုန်ဆေးပြားသို့မဟုတ်တောင့သို့ဖန်ဆင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများရောနှော, ဆေးလုံး presser, ဆေးတောင့်ထား, ဦးထုပ်စက်, etc ထိုသို့သောပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်အလိုတော်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေမှကူညီပေးသည်။
Oxandrolone (Anavar) ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Stanozolol (Winstrol / Winnie) ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Methandrostenolone (Dianabol) ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
1-testosterone အခြေစိုက်စခန်း / DHB
DIY နှင့် Homebrew
Do-It-ကိုယ့်ကိုကိုယ် (DIY) နေအိမ်ယျာဉ်လျော့နည်းအရည်ပျော်မှတ်နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်စတီရွိုက်ဆီကနေစတင်ရန်ပိုကောင်းဖြစ်ကြပြီးအများအားအရည်များနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဆီများကိုမွငျ။ အဆိုပါအကြံပြု steroids အဖြစ်ကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်:
testosterone cypionate အမှုန့်
Nandrolone Decanoate (DECA) ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Nandrolone phenylpropionate / NPP အမှုန့်
Trenbolone Enanthate အမှုန့်
Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Boldenone Undecylenate / Equipoise ကုန်ကြမ်းအရည်
Drostanolone / Masteron Enanthate အမှုန့်
Drostanolone / Masteron Propionate အမှုန့်
Testosteorne Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Methandrostenolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Oxandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့် လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းအရည် Drostanolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
1 ။ testosterone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
testosterone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တွဲနေတဲ့အနှေးသရုပ်ဆောင်ရှည်လျား Ester နှင့်အတူတစ်စင်ကြယ်သော testosterone ဟော်မုန်းသည်နှင့်မြင့်မားသောလူကြိုက်များတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Propionate ဗားရှင်းလိုပဲကအားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်မှုများကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအသုံးပြုအသုံးအများဆုံးပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ testosterone Enanthate ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများသည်အတူတူပင်အတိအကျရလဒ်များကိုယေဘုယျအားဆေးများဆင်တူယူဆသည့် Propionate ဗားရှင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရရှိသောလိမ့်မည်။
နှေး-သရုပ်ဆောင်ရှည်လျား Ester နှင့်အတူ testosterone
2 ။ Methandrostenolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Methandrostenolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်အရေးကြီးဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင်ဒီလူကြိုက်အများဆုံးပါးစပ်အစဉ်အဆက်စျေးကွက်ဝင်တိုက်ဖို့ Steroid တစ်မျိုးနှင့်မည်သည့်ပုံစံအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ နီးပါးအမြဲတစ်ဦးပါးစပ်တက်ဘလက်အဖြစ်ကိုတွေ့နေစဉ်, Methandrostenolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ်ထိုးဆေးဖြေရှင်းချက်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်တက်ဘလက်များအုပ်ချုပ်ရေး၏အဓိကလမ်းကြောင်းကိုယ်စားပြုသည်။
အစဉ်အဆက်စျေးကွက်ဝင်တိုက်ရန်ရေပန်းအစားဆုံးပါးစပ် Steroid တစ်မျိုး
3 ။ Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
အဆိုပါ acetate Ester အဆိုပါ Finaplix မော်လီကျူးတွဲဟာအလွန်တိုတောင်းသော-ကွင်းဆက် Ester ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2-3 ရက်ပေါင်းတစ်ခုတက်ကြွစွာဘဝရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်မွငျ့မားနှင့်တည်ငြိမ် trenbolone ၏အသှေးကိုအဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, နေ့စဉ်ဆေးထိုးမကြာခဏအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ acetate Ester အဆိုပါ acetate Ester ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစတင်ခြင်းအပေါ်ရပ်စဲနိုင်ပါသည်တစ်ဦးလျင်မြန်စွာရှင်းလင်းခြင်းအချိန်နှင့်အတူ coupled အမြန်အကျိုးအမြတ်ရှာဖှသေူမှအကျိုးရှိသည့်ဟော်မုန်းတစ်ခုလျင်မြန်စွာနှင့်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုပေးသည်။
Trenbolone ၏အလွန်တိုတောင်းသော-ကွင်းဆက် Ester
4 ။ Oxandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Anavar အားလုံးအချိန်လူကြိုက်အများဆုံးပါးစပ်ဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းကိုကိုယ်စားပြု, ဤအကြီးအကျယ်ယင်း၏ကောင်းစွာသည်းခံသဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအားဖြင့်လုံခြုံစွာသုံးနိုငျသောနညျးငယျဟို steroids တဦးဖြစ်ပြီး, သူကလည်းဖော်ရွေအရှိဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တဦးတည်းပါပဲ။ သို့သော်အချို့စက်ဝိုင်းထဲမှာ Anavar ကိုအလွန်ကြောင့်ယင်း၏ပျော့သဘောသဘာဝမှ underappreciated ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤယေဘုယျအားဖြင့်လက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ Stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
ပိုမိုလူသိများဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းနေစဉ်, Stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သောလူဦးရေကို အသုံးပြု. Steroid တစ်မျိုးအများစုအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာယောက်ျားမိန်းမတို့ကအသုံးပြုနိုင်မယ့်တရားမျှတစွာပျော့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အညီအမျှအရေးကြီးသောကြောင့်မြောက်မြားစွာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းအဘို့အမြင့်မားထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည်။
လူဦးရေကို အသုံးပြု. Steroid တစ်မျိုးအများစုတို့တွင်လူကြိုက်များ
လုံခြုံစွာယောက်ျားမိန်းမတို့အားဖြင့်သုံးနိုငျသောဟို Steroid တစ်မျိုး
6 ။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း
လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဟာ anterior pituitary gland ကနေထုတ်လုပ်တာပရိုတိန်းဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးနထေိုငျလူသားတွေကထုတ်လုပ်နှင့်ကလေးဘဝကာလအတွင်းယင်း၏အမြင့်မားဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ HGH ကြောင့်အရိုး, အရိုးကြွက်သားများနှင့်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသက်ရောက်သည်အတိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးအပါဆုံးဟော်မုန်း၏တဦးတည်းကိုယ်စားပြုအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးမြောက်မြားစွာကိုအခြားဒေသများရှိအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်။
အဆိုပါ anterior pituitary gland ကနေထုတ်လုပ်ပရိုတိန်းဟော်မုန်း
လူဦးရေကို အသုံးပြု. Steroid တစ်မျိုးထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံး
7 ။ Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာတစ်ဦးလွန်စွာအကျိုးရှိ Off-ရာသီအစုလိုက်အပြုံလိုက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်သူ့ရဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့မြားစှာအားကစားစက်ဝိုင်းထဲမှာလည်းအကြိုက်ဆုံးင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကြီးမားတဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ငှါ, Nandrolone ဟော်မုန်းဆေးဝါးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်
တစ်ဦးလွန်စွာအကျိုးရှိ Off-ရာသီအစုလိုက်အပြုံလိုက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုဟို steroids တစ်ခုမှာ
8 ။ Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းအရည်
Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်းအရည်ဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဆင်းသက်လာတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကာဗွန်တဦးတည်းနှစ်ဦးအနေအထားမှာတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးအတွက်အလွန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Undecylenate Ester ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုလိုက်နာဖို့ဟော်မုန်းတစ်ခုနှေးကွေးနေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ချိနှင့်အတူ, ဆေးထိုးပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4-21 ရက်ပေါင်း Boldenone အတွက်အထွတ်အထိပ်လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏အများဆုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကို၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားမြားနှငျ့ကာယဗလအားဖြင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော steroids တစ်ခုမှာ
9 ။ Drostanolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
စျေးကွက်ပေါ်မှာရှိသမျှ Masteron များ၏အများစု Drostanolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကြလိမ့်မည်။ Drostanolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ် dihydrotestosterone (DHT) ဟို Steroid တစ်မျိုးဆင်းသက်လာသည်။ အထူးသ Masteron ဒါဟာအရိုးကြွက်သား၌တွေ့သော 2-hydroxysteroid dehydrogenase အင်ဇိုင်းကဇီဝဖြစ်စဉ်ပျက်ပြားခြင်းမှဟော်မုန်းကာကွယ်ပေးသည်, ဖွဲ့စည်းပုံကာဗွန်3အနေအထားမှာမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသော DHT ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွန်ဟော်မုန်းရဲ့ဟိုသဘောသဘာဝတိုးပွားစေပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားမြားနှငျ့ကာယဗလအသုံးပြုသော Drostanolone ၏ဆုံး Ester
10 ။ Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဈေးကွက်အပေါ်လုံခြုံဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းစဉ်းစားနှင့်ကဤပြောဆိုချက်ကို back ဖို့အကောင်းဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သယ်ဆောင်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီ Steroid တစ်မျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲသိရပါကလေးများနှင့်အချိန်မတန်မီမွေးကင်းစဆက်ဆံဖို့ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအရိုးပွရောဂါနှင့် sarcopenia များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအတော်လေးကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင် Steroid တစ်မျိုး
အများအပြားပါးစပ်ဟိုစတီရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ထူးခြားသောကြောင်းတစ်ခုပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုး
ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် Genius AAS ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်
က Steroid တစ်မျိုး၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကုန်ကြမ်းမှကြွလာသောအခါ, များစွာသောချက်ချင်းတရုတ်တည်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုအာရုံစိုက်။ ဒါဟာဟိုများထုတ်လုပ်များအတွက်ကုန်ကြမ်းအခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့နေကြသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ထံမှ steroids များအတွက်ကုန်ကြမ်းတော်တော်များများအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရေပန်းစားသည်:
စတီရွိုက်အများအပြားထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်နောက်ဆုံးအချက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကွောငျ့ဖွစျသညျ တရုတ်ထံမှ steroids များအတွက်ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူ။ ဤနေရာတွင်အရောင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ်နှင့်ဝယ်ယူကုန်စည်များအတွက်အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများပေးရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ ဒါဟာတရုတ်၌သင်တို့အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကုန်ကြမ်းမဝယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမကြီးမားစက်ရုံများနှင့်ထုတ်လုပ်သူမှသီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများရှိပါတယ်။ လုံလောက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတော်ကြာအရည်အသွေးကိုလက်မှတ်များဘို့ခွင့်ပြုဝယ်။
အချို့ကုမ္ပဏီတွေကနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်, ဒါကြောင့် steroids ထုတ်လုပ်များအတွက်အမှုန့်မဝယ်ခင်ကကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကြောင့်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သာဒီပြီးနောက်တရုတ်ထံမှ steroids များအတွက်ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်ဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရှိရာထုတ်လုပ်မှုတိုင်းပြည်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏။
ဒါပေမယ့်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများ (ugl) သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများအတွက်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာဆေးညွှန်းသို့မဟုတ် legit တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများပေးဘို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး, ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်ကိုက်ညီစျေးကွက်န်းကျင်သတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဝယ်ယူသင်လိုချင်တဲ့ကုန်ကြမ်းမှီ, အတုသူတွေကိုထံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, လက်ျာနှင့်ပါရမီရှာတွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဟို steroids ကုန်ကြမ်းယ်ယူခြင်းအမေးအဖြေများ
1 ။ အမိန့်အားမရရှေ့တော်၌ထိုထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖြေ COA, HPLC, HNMR ရရှိနိုင်ပါသည်။
B က: တတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းများအားဖြင့်စမ်းသပ်စဉ်စာတမ်းများအချိန်ဖို့အချိန်ပေးလိမ့်မည်။
AASraw ဖို့အားလုံးကိုပေးချေမှုများအတွက်, သူတို့5နှစ်အတွင်း, ဆုတ်ခွာပေးဆောင်, လွှဲပြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှဘာမှများအတွက်အာမခံချက်နေကြသည်။
အဆိုပါ wareshouse အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းအချိန်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးအာမခံပါလိမ့်မယ်တဲ့စနစ်, ကစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုအဖြစ်ငွေပေးချေမှုလုပ်ဖို့သင်သည်သင်၏အတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့လိမ့်မည်, ရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ဝယ်ယူမှုအလို့ငှာပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ကနေဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေး Manager ကိုကရိုးရှင်းပြီးအတည်ပြုချက်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဟို steroids ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကနေအကျိုးကျေးဇူးများ
အဘယ်သူမျှမအောက်၌ကိုယ်အဘို့ကစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်မှလာသောအခါအချို့သောမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများ, ကနေဂီယာ dosaged ။
အဆိုပါ AAS ကုန်ကြမ်းပြန်လည်ရောင်းချရန်ဖို့ငွေရတတ်ခြင်း
300 Views စာ
သငျသညျယ်ယူရန် Winstrol အွန်လိုင်းခင်မှာကိုသိရန်လိုအပ်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ
DECA အမှုန့်-Ultimate လမ်းညွှန် Nandrolone Decanoate (Durabolin) Make လုပ်နည်း	MK-677 (Ibutamoren) ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါသလား? Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [2019 NEW]